လူစာရငျးအပွောငျးအလဲ၊ League စနဈအကွောငျး စသဖွငျ့ PSG.LGD အသငျးသဈနဲ့ အငျတာဗြူး – Gaming Noodle
PSG.LGD အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈနှဈအတှငျး တရုတျနိုငျငံရဲ့အကောငျးဆုံး Dota2 အသငျးလို့ သတျမှတျမယျဆိုရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ Ti ကိုနှဈကွိမျတိုငျ နီးကပျစှာစိနျချေါခဲ့ပမေယျ့ အရှုံးပေးခဲ့ရပွီး အကောငျးဆုံးအရှုံးသမားတဈယောကျ ဖွဈခဲ့တဲ့သူတို့ဟာ အခု DPC Season အတှငျးမှာတော့ လူစာရငျးမတညျငွိမျမှုနဲ့အတူ ရလဒျတှဆေိုးဝါးလကျြရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုလကျရှိလူစာရငျးဖွဈတဲ့ Chalice, Maybe, eLeVeN, fy, xNova တို့နဲ့တော့ နောကျဆုံးဆော့ခဲ့တဲ့ ပှဲတှမှော VG, iG နဲ့ RNG တို့လို ပွညျတှငျးပွိုငျဘကျကောငျးတှကေို ရှုံးပှဲတောငျမရှိဘဲ အပွတျအသတျအနိုငျယူပွခဲ့ပါတယျ။ ယခငျက old-eleven နာမညျနဲ့လူသိမြားတဲ့ eLeVeN ဟာ ယခငျ EHOME နဲ့နာမညျကြျောခဲ့ပွီး LGD မှာ အရငျကလညျး အဌားဆော့ခဲ့သလို အခုလညျး အဌားနဲ့ထပျရောကျလာတာပါ။ လကျရှိ Offlane ဖွဈတဲ့ Chalice က Carry Role ကို ပွောငျးလဲဆော့ခဲ့ပွီးနောကျ ထငျမှတျမထားလောကျတဲ့ ရလဒျတှေ နခေ့ငျြးညခငျြးရလာခဲ့ပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ရကျအနညျးငယျက PSG.LGD ဟာ သူတို့ရဲ့လူစာရငျးသဈကို မိတျဆကျခဲ့ပွီးနောကျ eSportsFocus မှ သူတို့တဈသငျးလုံးနဲ့ အငျတာဗြူးခဲ့ပွီး လကျရှိလူစာရငျးအပွောငျးအလဲ၊ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ နောကျရာသီမှာပွောငျးလဲမယျ့ League စနဈအပျေါအမွငျ စတာတှကေို မေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။
မေး – ပွီးခဲ့တဲ့နှဈနှဈအတှငျး ဒုတိယနဲ့တတိယရခဲ့ပမေယျ့ Aegis ကို ကိုငျမွှောကျဖို့နီးကပျခဲ့ပွီးမှတော့ ခငျဗြားတို့ ကနြေပျမှာ မဟုတျဘူးထငျပါတယျ။ ဒါက စိတျဓါတျပိုငျးကို ပွောငျးလဲမှုရှိခဲ့သလား?
ဖွေ – အငျး၊ ကြှနျတျောတို့ မလုပျနိုငျခဲ့တာ နှမွောစရာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဒါ့ကွောငျ့တော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စိတျဓါတျပိုငျးကို ထိခိုကျမှာမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ပနျးတိုငျက အမွဲတမျးတဈခုတညျးပါပဲ – Ti ကိုအနိုငျရဖို့ပေါ့။
မေး – ဒီရာသီအစမှာ ပုံမှနျလကျစှမျးထကျနိမျ့ကခြဲ့ရတဲ့အကွောငျးရငျးက ဘာမြားလဲ?
ဖွေ – ကြှနျတျောတို့ကတော့ ဒါကို ‘ပုံမှနျလကျစှမျးမပွနိုငျဘူး’ လို့ မချေါပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Patch Update တှအေပွီးမှာ လကျရှိ Meta ကို လိုကျလြောညီထှပွေောငျးလဲပွီး ကြှမျးကငျြစှာကစားနိုငျဖို့ မလုပျခဲ့မိဘူး၊ ဒါက ကြှနျတျောတို့ကို ရှုံးပှဲရစခေဲ့တာပါ။ လူစာရငျးအပွောငျးအလဲနဲ့လညျးနညျးနညျးဆိုငျတာပေါ့၊ ပွီးတော့ တှဲဖကျညီမှုရယျ၊ အသငျးသားသဈတှနေဲ့ အံဝငျခှငျကမြရှိတာရယျလညျး ပါပါတယျ။
မေး – ခငျဗြားတို့အနနေဲ့ လူစာရငျးကို မပွောငျးလဲတာကွာခဲ့ပွီနျော၊ အခုရကျပိုငျး အပွောငျးအလဲတှကေ ခငျဗြားအပျေါ ဘယျလိုသကျရောကျသလဲ?
ဖွေ – နညျးနညျးအပွောငျးအလဲလုပျကွညျ့ကွတာပါ။ old eLeVeN ကိုပွနျချေါပွီး Chalice ကို Carry ကစားစတောက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စတိုငျလျနဲ့ ဗြူဟာပိုငျးကို ပွောငျးလဲစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုအပွောငျးအလဲကို ခံစားရတာကောငျးပါတယျ။
မေး – Chalice တဈယောကျ Carry ပွောငျးဆော့တာနဲ့ပတျသကျပွီး fy က သူ့ဆီက Gold/Exp တှေ ဆကျပွီး လုယူနဦေးမှာလား တနညျးအားဖွငျ့ Chalice ကိုသှေးစုပျနဦေးမှာလား၊ ဒါမှမဟုတျ fy က လူသဈ old eLeVeN (ယခု Offlane) ကိုပဲ အနိုငျဆကျကငျြ့သှားမှာလား?
ဖွေ – အဲဒီ သှေးစုပျကောငျ Meme က အမွဲတမျး Community အကွိုကျတှစေ့ရာဖွဈနမှောပါ။ fy ရဲ့ အစှမျးထကျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျက အမွဲတမျးပှဲတဈပှဲကိုအနိုငျရဖို့ အဓိကအခကျြဖွဈနဦေးမှာပါ။ ပရိသတျတှကေို စိတျပကျြစရာပွောရရငျ old eLeVeN က fy ဟာ သူ့ကိုဂုတျသှေးစုပျနတေယျလို့ မထငျပါဘူးဗြာ။ သူက fy နဲ့တှဲဆော့ရတာ အရမျးသကျတောငျ့သကျသာ ရှိနပေါတယျ။
မေး – ခငျဗြားတို့ လူစာရငျးသဈရဲ့ပှဲဦးထှကျက WeSave! Charity Play နျော၊ ဒီပှဲမှာ တရုတျဒသေအတှကျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး တဈကွော့ပွနျ ကွမျးလာတဲ့ PSG.LGD ကိုမကျြဝါးထငျထငျမွငျရလို့ အရမျးကနြေပျအံ့သွနကွေပါတယျ။ iG နဲ့ VG ပှဲစဉျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုခံစားရပါသလဲ?
ဖွေ – ဒီနှဈပှဲရဲ့ရလဒျတှကေ တကယျတမျးတော့ သိပျပွီးအတညျယူလို့မရပါဘူး။ သူတို့က အှနျလိုငျးကနေ ကစားခဲ့ပွီး ရနျပုံငှပှေဲအတှကျ အလှပွဆော့ပွခဲ့တာနဲ့ ပိုတူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့ပှဲတှကေနေ ကြှနျတျောတို့ အသငျးတှဲဖကျညီမှုကို စတငျတညျဆောကျနိုငျလာပွီလို့ ကောငျးမှနျတဲ့ခံစားခကျြကိုတော့ ရထားပါတယျ။
မေး – လကျရှိမှာ မဂြောပွိုငျပှဲနှဈခုကို လကျလှတျခဲ့ရပွီး နောကျထပျသုံးပှဲက ရှဆေို့ငျး သို့ ဖကျြသိမျးခဲ့တော့ အခုလကျရှိ DPC အနအေထားကို ဖိအားမြားတယျလို့ ခံစားရလား။ ဒါဟာ ခငျဗြားတို့အတှကျ စိနျချေါမှုဖွဈလာနိုငျသလား?
ဖွေ – လကျရှိမှာကနျြသေးတဲ့ရာသီကိုဆကျဆော့နိုငျပါ့မလား မသိရတဲ့အတှကျ ဖိအားတော့ခံရတာ အမှနျပါပဲ။ ရလာမယျ့ အခှငျ့အရေးတိုငျးကို ဆုပျကိုငျနိုငျဖို့ပဲ ကွိုးစားရမှာပါ။
မေး – အသဈဖှဲ့စညျးလိုကျတဲ့ တရုတျ Dota2 ပရိုအဖှဲ့အစညျး Chinese DOTA2 Professional Association အတိုကောကျ CDA နဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုထငျမွငျလဲဗြ?
ဖွေ – ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအခွအေနအေရတော့ လကျရှိမှာ အားလုံးအတှကျ LAN ပွိုငျပှဲတှရှေိဦးမှာမဟုတျပါဘူး။ CDA က အှနျလိုငျးလိဂျပွိုငျပှဲတှေ ကောငျးမှနျစှာစီစဉျပေးနိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့အနနေဲ့ အဆငျ့မွငျ့ ပွိုငျပှဲတှကေငျြးပခှငျ့နဲ့အတူ လာမယျ့အှနျလိုငျးပွိုငျပှဲတှရေဲ့ အရညျအသှေးနဲ့သိက်ခာကိုထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ကစားသမားတှအေပျေါ စညျးကမျးခမြှတျနိုငျတဲ့ အာဏာကိုလညျး ရရှိသငျ့ပါတယျ။
မေး – နောကျနှဈရဲ့ League ပုံစံကို ဘယျလိုမွငျလဲဗြ၊ ပုံမှနျထကျစာရငျ ကောငျးကြိုးနဲ့ဆိုးကြိုးတှေ ဘယျလိုရှိလာနိုငျလဲ?
ဖွေ – League ပုံစံ Format ဟာ ပှဲကွညျ့ပရိသတျတှအေတှကျတော့ ပိုပွီးတညျငွိမျတဲ့ အခြိနျဇယားကို ယူဆောငျလာသလို အသငျးတှလေညျး တဈနိုငျငံနဲ့တဈနိုငျငံကို အရငျလိုကူးသနျးနစေရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါ့အပွငျ Tier အနိမျ့အသငျးတှဖေို့ ပိုမွငျ့တဲ့အဆငျ့မှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရရှိလာမှာဖွဈသလို ထိတှမှေု့လညျးပိုမြားလာမှာပါ။ ဒါဟာ Pro လောကအတှကျ ပိုကောငျးလာမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆုကွေးငှကေတော့ နညျးလာတယျ။ League Format က အသငျးကွီးတှရေဲ့ တိုးတကျမှုကို တငျးကပျြပွီး Low Tier အသငျးတှကေို အားပေးအားမွှောကျပွုလာပါတယျ။
မေး – အသဈစကျစကျ Patch 7.25 နဲ့ပတျသကျပွီးတော့ရော? သူယူဆောငျလာတဲ့ အပွောငျးအလဲတှကေို ဘယျလိုမွငျလဲ၊ ခငျဗြားအတှကျ ဘယျအပိုငျးက စိတျဝငျစားစရာအကောငျးဆုံးလဲ?
ဖွေ – TP Scroll ရဲ့ဈေးနှုနျးအပွောငျးအလဲက ဂိမျးရဲ့ Pace ကို အတျောလေးထိခိုကျစပေါတယျ။ ပွီးတော့ Killing Streak ကို အဆုံးသတျရငျ ရလာတဲ့ Bounty ကလညျး တကယျမြားတယျ။ အားလုံးကိုနားလညျဖို့ ကွိုးစားနဆေဲပါပဲ။
မေး – လကျရှိတရုတျ Dota2 မွငျကှငျးမှာ ကစားသမားကောငျးအသဈတှေ ရှာဖို့ခကျလာပွီနျော၊ အဲဒါကို ဘယျလိုထငျလဲ?
ဖွေ – ဒါကတော့ Dota2 ရဲ့အနာဂါတျအတှကျ တကယျဆိုးပါတယျ။ ဂိမျးတိုငျးဂိမျးတိုငျးဟာ သူတို့သကျတမျးရှညျအောငျ ကစားသမားသှေးသဈလောငျးနနေိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ League စနဈက Dota2 အတှကျ အငျအားသဈတှေ ယူဆောငျလာဖို့ မြှျောလငျ့မိတယျ။
မေး – Community ထဲက အသံတှဟော ပရိုကစားသမားအပျေါ ဘယျလောကျထိသကျရောကျမှုရှိလဲ?
ဖွေ – အဲ့အပိုငျးတှကေ ကစားသမားတှအေတှကျ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ဖိအားဖွဈစတောပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သခြောလကေ့ငျြ့ထားတဲ့ ကြှနျတျောတို့အတှကျတော့ လှမျးမိုးမှုသိပျမရှိပါဘူး။
မငျးတို့ကို အမွဲတမျးအားပေးနတေဲ့ ပရိသတျကို နှုတျဆကျစကားပွောပေးပါဦး။
တောကျလြှောကျအားပေးလာတဲ့ ကြှနျတျောတို့ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုနဲ့မတ်ေတာကို အမြားကွီးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ရဲ့ အားပေးမှုတှနေဲ့ ဖိအားတှဟော ကြှနျတျောတို့အတှကျ စိတျခှနျအားဖွဈစပွေီး ရှသေို့ဆကျတကျလှမျးနစေရေနျ အထောကျအကူဖွဈပါတယျ။ ဆကျလကျကွိုးစားရငျး ပရိသတျအတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာပှဲတှေ ဆော့ကစားပေးသှားမှာပါ။
Ref – VPGame
လူစာရင်းအပြောင်းအလဲ၊ League စနစ်အကြောင်း စသဖြင့် PSG.LGD အသင်းသစ်နဲ့ အင်တာဗျူး
PSG.LGD အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံး Dota2 အသင်းလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ Ti ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင် နီးကပ်စွာစိန်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် အရှုံးပေးခဲ့ရပြီး အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့ဟာ အခု DPC Season အတွင်းမှာတော့ လူစာရင်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူ ရလဒ်တွေဆိုးဝါးလျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိလူစာရင်းဖြစ်တဲ့ Chalice, Maybe, eLeVeN, fy, xNova တို့နဲ့တော့ နောက်ဆုံးဆော့ခဲ့တဲ့ ပွဲတွေမှာ VG, iG နဲ့ RNG တို့လို ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက်ကောင်းတွေကို ရှုံးပွဲတောင်မရှိဘဲ အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူပြခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က old-eleven နာမည်နဲ့လူသိများတဲ့ eLeVeN ဟာ ယခင် EHOME နဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့ပြီး LGD မှာ အရင်ကလည်း အဌားဆော့ခဲ့သလို အခုလည်း အဌားနဲ့ထပ်ရောက်လာတာပါ။ လက်ရှိ Offlane ဖြစ်တဲ့ Chalice က Carry Role ကို ပြောင်းလဲဆော့ခဲ့ပြီးနောက် ထင်မှတ်မထားလောက်တဲ့ ရလဒ်တွေ နေ့ချင်းညချင်းရလာခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က PSG.LGD ဟာ သူတို့ရဲ့လူစာရင်းသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် eSportsFocus မှ သူတို့တစ်သင်းလုံးနဲ့ အင်တာဗျူးခဲ့ပြီး လက်ရှိလူစာရင်းအပြောင်းအလဲ၊ ရည်မှန်းချက်နဲ့ နောက်ရာသီမှာပြောင်းလဲမယ့် League စနစ်အပေါ်အမြင် စတာတွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
မေး – ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်း ဒုတိယနဲ့တတိယရခဲ့ပေမယ့် Aegis ကို ကိုင်မြှောက်ဖို့နီးကပ်ခဲ့ပြီးမှတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျေနပ်မှာ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါက စိတ်ဓါတ်ပိုင်းကို ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သလား?
ဖြေ – အင်း၊ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့တာ နှမြောစရာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါ့ကြောင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းကို ထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်က အမြဲတမ်းတစ်ခုတည်းပါပဲ – Ti ကိုအနိုင်ရဖို့ပေါ့။
မေး – ဒီရာသီအစမှာ ပုံမှန်လက်စွမ်းထက်နိမ့်ကျခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းက ဘာများလဲ?
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒါကို ‘ပုံမှန်လက်စွမ်းမပြနိုင်ဘူး’ လို့ မခေါ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Patch Update တွေအပြီးမှာ လက်ရှိ Meta ကို လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲပြီး ကျွမ်းကျင်စွာကစားနိုင်ဖို့ မလုပ်ခဲ့မိဘူး၊ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို ရှုံးပွဲရစေခဲ့တာပါ။ လူစာရင်းအပြောင်းအလဲနဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်တာပေါ့၊ ပြီးတော့ တွဲဖက်ညီမှုရယ်၊ အသင်းသားသစ်တွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျမရှိတာရယ်လည်း ပါပါတယ်။
မေး – ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ လူစာရင်းကို မပြောင်းလဲတာကြာခဲ့ပြီနော်၊ အခုရက်ပိုင်း အပြောင်းအလဲတွေက ခင်ဗျားအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲ?
ဖြေ – နည်းနည်းအပြောင်းအလဲလုပ်ကြည့်ကြတာပါ။ old eLeVeN ကိုပြန်ခေါ်ပြီး Chalice ကို Carry ကစားစေတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စတိုင်လ်နဲ့ ဗျူဟာပိုင်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအပြောင်းအလဲကို ခံစားရတာကောင်းပါတယ်။
မေး – Chalice တစ်ယောက် Carry ပြောင်းဆော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး fy က သူ့ဆီက Gold/Exp တွေ ဆက်ပြီး လုယူနေဦးမှာလား တနည်းအားဖြင့် Chalice ကိုသွေးစုပ်နေဦးမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် fy က လူသစ် old eLeVeN (ယခု Offlane) ကိုပဲ အနိုင်ဆက်ကျင့်သွားမှာလား?
ဖြေ – အဲဒီ သွေးစုပ်ကောင် Meme က အမြဲတမ်း Community အကြိုက်တွေ့စရာဖြစ်နေမှာပါ။ fy ရဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အမြဲတမ်းပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ အဓိကအချက်ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ပျက်စရာပြောရရင် old eLeVeN က fy ဟာ သူ့ကိုဂုတ်သွေးစုပ်နေတယ်လို့ မထင်ပါဘူးဗျာ။ သူက fy နဲ့တွဲဆော့ရတာ အရမ်းသက်တောင့်သက်သာ ရှိနေပါတယ်။
မေး – ခင်ဗျားတို့ လူစာရင်းသစ်ရဲ့ပွဲဦးထွက်က WeSave! Charity Play နော်၊ ဒီပွဲမှာ တရုတ်ဒေသအတွက် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်ကြော့ပြန် ကြမ်းလာတဲ့ PSG.LGD ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရလို့ အရမ်းကျေနပ်အံ့သြနေကြပါတယ်။ iG နဲ့ VG ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ?
ဖြေ – ဒီနှစ်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေက တကယ်တမ်းတော့ သိပ်ပြီးအတည်ယူလို့မရပါဘူး။ သူတို့က အွန်လိုင်းကနေ ကစားခဲ့ပြီး ရန်ပုံငွေပွဲအတွက် အလှပြဆော့ပြခဲ့တာနဲ့ ပိုတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေနဲ့ လေ့ကျင့်ပွဲတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ အသင်းတွဲဖက်ညီမှုကို စတင်တည်ဆောက်နိုင်လာပြီလို့ ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ ရထားပါတယ်။
မေး – လက်ရှိမှာ မေဂျာပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကို လက်လွတ်ခဲ့ရပြီး နောက်ထပ်သုံးပွဲက ရွှေ့ဆိုင်း သို့ ဖျက်သိမ်းခဲ့တော့ အခုလက်ရှိ DPC အနေအထားကို ဖိအားများတယ်လို့ ခံစားရလား။ ဒါဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာနိုင်သလား?
ဖြေ – လက်ရှိမှာကျန်သေးတဲ့ရာသီကိုဆက်ဆော့နိုင်ပါ့မလား မသိရတဲ့အတွက် ဖိအားတော့ခံရတာ အမှန်ပါပဲ။ ရလာမယ့် အခွင့်အရေးတိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားရမှာပါ။
မေး – အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ တရုတ် Dota2 ပရိုအဖွဲ့အစည်း Chinese DOTA2 Professional Association အတိုကောက် CDA နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်မြင်လဲဗျ?
ဖြေ – ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အခြေအနေအရတော့ လက်ရှိမှာ အားလုံးအတွက် LAN ပြိုင်ပွဲတွေရှိဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ CDA က အွန်လိုင်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေ ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့ အဆင့်မြင့် ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်နဲ့အတူ လာမယ့်အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့သိက္ခာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကစားသမားတွေအပေါ် စည်းကမ်းချမှတ်နိုင်တဲ့ အာဏာကိုလည်း ရရှိသင့်ပါတယ်။
မေး – နောက်နှစ်ရဲ့ League ပုံစံကို ဘယ်လိုမြင်လဲဗျ၊ ပုံမှန်ထက်စာရင် ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေ ဘယ်လိုရှိလာနိုင်လဲ?
ဖြေ – League ပုံစံ Format ဟာ ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ပိုပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ အချိန်ဇယားကို ယူဆောင်လာသလို အသင်းတွေလည်း တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံကို အရင်လိုကူးသန်းနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါ့အပြင် Tier အနိမ့်အသင်းတွေဖို့ ပိုမြင့်တဲ့အဆင့်မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိလာမှာဖြစ်သလို ထိတွေ့မှုလည်းပိုများလာမှာပါ။ ဒါဟာ Pro လောကအတွက် ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုကြေးငွေကတော့ နည်းလာတယ်။ League Format က အသင်းကြီးတွေရဲ့ တိုးတက်မှုကို တင်းကျပ်ပြီး Low Tier အသင်းတွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုလာပါတယ်။
မေး – အသစ်စက်စက် Patch 7.25 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော? သူယူဆောင်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ခင်ဗျားအတွက် ဘယ်အပိုင်းက စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလဲ?
ဖြေ – TP Scroll ရဲ့ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲက ဂိမ်းရဲ့ Pace ကို အတော်လေးထိခိုက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ Killing Streak ကို အဆုံးသတ်ရင် ရလာတဲ့ Bounty ကလည်း တကယ်များတယ်။ အားလုံးကိုနားလည်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါပဲ။
မေး – လက်ရှိတရုတ် Dota2 မြင်ကွင်းမှာ ကစားသမားကောင်းအသစ်တွေ ရှာဖို့ခက်လာပြီနော်၊ အဲဒါကို ဘယ်လိုထင်လဲ?
ဖြေ – ဒါကတော့ Dota2 ရဲ့အနာဂါတ်အတွက် တကယ်ဆိုးပါတယ်။ ဂိမ်းတိုင်းဂိမ်းတိုင်းဟာ သူတို့သက်တမ်းရှည်အောင် ကစားသမားသွေးသစ်လောင်းနေနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ League စနစ်က Dota2 အတွက် အင်အားသစ်တွေ ယူဆောင်လာဖို့ မျှော်လင့်မိတယ်။
မေး – Community ထဲက အသံတွေဟာ ပရိုကစားသမားအပေါ် ဘယ်လောက်ထိသက်ရောက်မှုရှိလဲ?
ဖြေ – အဲ့အပိုင်းတွေက ကစားသမားတွေအတွက် အနည်းနဲ့အများတော့ ဖိအားဖြစ်စေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ လွှမ်းမိုးမှုသိပ်မရှိပါဘူး။
မင်းတို့ကို အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ကို နှုတ်ဆက်စကားပြောပေးပါဦး။
တောက်လျှောက်အားပေးလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့မေတ္တာကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အားပေးမှုတွေနဲ့ ဖိအားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေပြီး ရှေ့သို့ဆက်တက်လှမ်းနေစေရန် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ကြိုးစားရင်း ပရိသတ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲတွေ ဆော့ကစားပေးသွားမှာပါ။